”Maanta shacabka shilin kama soo galo!” – Imaaraadka oo la sheegay inuu iska qaato dakhliga Dekedda Berbera! | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Maanta shacabka shilin kama soo galo!” – Imaaraadka oo la sheegay inuu...
”Maanta shacabka shilin kama soo galo!” – Imaaraadka oo la sheegay inuu iska qaato dakhliga Dekedda Berbera!
(Hadalsame) 19 Sebt 2019 – Wax uu yidhi, hadalkii hore waan ka noqday oo garoonku weli waa saldhig millateri. Wax uu kale oo yidhi garoonka dunida u gu weyn baa la ga dhisayaa Berbera, oo xitaa makuukyada dayaxgacmeedka qaadaa ku soo dagi doona. Alaabada dekedda ka soo dagta ayaynnu dayuurado aad u waaweyn ku dhoofin doonnaa ayuu sii yidhi. Waxa la dhoofinayo iyo dayuuradaha dhoofinay iyo cidda dhoofsanaysa iyo meesha ay waxaasi ka shaqayso ma sheegi karo.
Waxaas oo cantarabaqash ah wax uu ku qarinayaa fashilka ballanqaadkii dhalanteedka ahaa ee “dhisamaha Berberba Corridor” iyo dhagixii uu beri fog cidlada dhigay ee sida dadka sixran la ga dul ciyaaray. Dunidu diyaar bay u ahayd dhimaha mashruucaa, maantana waa kaa faraha madhan ka taagan.
Ina Geelle sidii uu doonayay baa socotay. Wax uu kale oo ku qarinayaa dakhligii Berbera umadda ka soo gali jiray ee xaquqalinka loo qaddintay si loo helo lacag dalka la gu qabsado. Maantana waa taas oo umaddu shilin ka ma hesho ishii dhaqaale ee u gu muhiimsanayd.
Dadkuna waa bukaansocod tamartii qabyaaladi ka fuuqsatay, marna waa kalluunkii Dahabi ee bilaa xusuusta ahaa oo labada gelin midba waxii la doono ayaa loo sheegayaa.
Previous article”Aaran-Jaan waa iskaashatada Shaydaanka!” – Nuqul ka tirsan buug uu Gaas uga sheekaynayo wixii kala qabsaday Faroole oo ”Telefoonka ku dhegeystey!”
Next articleDF Somalia oo diyaarinaysa ciidamo ilaaliya xeebaha dalka (Su’aal taagan)